Gingde blọgụ na-aghọ ngwa ngwa na usoro na atụmatụ maka ụlọ ọrụ, mana ọ gaghị ewe ogologo oge tupu ego ya adaa azụ 'naanị usoro nkwukọrịta ọzọ' nke ahụ nọ ebe ahụ yana akara ngosi, ọnọdụ, email, saịtị weebụ, yana mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta.
Ndị na-ede blọgụ nwere ọgụgụ isi ga-adabere iji nyere ụlọ ọrụ aka ịkwaga agịga ahụ. Afọ ole na ole sochirinụ ga - adị mma maka ndị na - ede blọgụ, ndị otu ndị ka ukwuu ga - aga n'ihu na - ekpochapụ ma ọ bụ na - achọ oge niile. Nke ahụ dị mma ịnụ, ọ bụghị ya? Ọ pụtara na ihe a niile abawo ya - ịkwụwa aka ọtọ na nghọta nwere ike wetara gị ihe ịga nke ọma.
Na ederede ahụ, na-ekele gị Loren Feldman kwuru, blogger na-aga nke ọma ga-eme ụfọdụ ederede na vidiyo maka c | net.
Akụkụ akụkụ: Mgbe m na-atụ ụjọ na Loren's raspy, cussing, na-ihu gị, East Coast na-ekwu okwu… ma ọ bụ na-enweghị nchekasị na-ele ya ka ọ na-akwa ụra - ana m atụ egwu ma nghọta ya na ihe ịga nke ọma ya. O gosipụtara na ị nwere ike ime ihe n'eziokwu, bụrụ onwe gị, nwee echiche, ma nwee ihe ịga nke ọma.
A ga-enwe ihe ọhụrụ ịde blọgụ n'ọdịnihu, dị nnọọ ka na akwụkwọ akụkọ… ma ọ gaghị ewe otu narị na iri ise afọ. Ọhụụ m banyere onye na-ede blọgụ n'ọdịnihu nwere ike ịgụnye nhọta olu okwu na-ederede na-agafe na nzacha ụtọ asụsụ, yana algorithms mara mma nke na-ahazi ọdịnaya ahụ, yana mmekọrịta 'echiche' na akpaaka na isiokwu metụtara ya dị na weebụ.
Blogde blọgụ na-eme n'ọdịnihu nwere ike ịlaghachi na Ahịa, n'agbanyeghị na anyị na-alụ ọgụ dị ka hel iji gbochie ya n'ebe ahụ taa. Ihe mere anyị ji alụ ọgụ ugbu a bụ n'ihi na a na-enyekarị onyinye azụmaahịa maka izu oke, mma na mma - ọ bụghị nsonaazụ, eziokwu na nghọta. Ndị na-ede blọgụ na ịde blọgụ adabaghị n'ime ugbo ala cubicle Marketing Executive.
Mgbe ọ bụ ihe dị mkpa na ụlọ ọrụ, ọ ga-agbanwe ndụ maka blogger nọọrọ onwe m dị ka m. Ndị ụlọ ọrụ ga-achọ ndị nwere ndị na - eso ụzọ, ndị nwere ike ide ihe nke ọma, ma dọrọ ha n'ime akpa ha dị mma. Ọ bụrụ na m na-agba ọsọ HP, Dell, IBM or Cisco, M ga-eji padding m web ọnụnọ na-ede blọgụ taa - tupu ha niile na-arahụ echi.
Mgbe onye ọ bụla na-ede blọgụ, anyị ga-ebuli elu ma ọ bụrụ na anyị agaa n'ihu ọhụụ. Enwela ahụ iru ala, anyị agaghị anọ ogologo oge.